Jun 16, 2019 1 min read Horror
ဒီဇာတ်ကားအကြောင်း ကျွန်တော်ရေးချင်ခဲ့ပေမဲ့ ရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ဘူး။ ရေးချင်ခဲ့မိတဲ့အကြောင်းအရင်းက ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ခဲ့မိတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လကျော်ခန့်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးသည့်တိုင် ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကို ယနေ့တိုင် လိုက်ဒုက္ခပေးကာ နှောက်ယှက်နေဆဲမို့ဖြစ်ပြီး ရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ခြင်းကတော့ အလွန်တရာကောင်းမွန်လှတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ကျွန်တော့်ရဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့ အရေးအသားတွေကြောင့် မပျက်စီးစေချင်တဲ့ စိတ်တွေရယ်ကြောင့်ပါ။
ဒါဆို အခုမှဘာလို့လာထရေးရသလဲဆိုတာ မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပြီ။ အမေးရှိရင် အဖြေရှိသည့်အားလျော်စွာ ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့ Train to Busan ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီး The Wailing ဟာ ပို၍ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ယူဆမိတဲ့အချက်ရယ် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကားကို တစ်ခြားသူတွေကိုလည်း သိစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေရယ်ကြောင့် ခုမှ ကောက်ကာငင်ကာ ထရေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ (စကားချပ်အနေနဲ့ပြောရရင် ခုလိုပြောလိုက်လို့Train to Busan ဟာ မကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ သူ့အဆင်နဲ့သူ အလွန်ကောင်းမွန်တာကြောင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် 4/5 stars ပေးထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။)
ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာထဲက Luke 24:38 အပုဒ်ကို ယူပြောရမယ်ဆိုရင် ‘Why are you troubled’ လို့Jesus က မေးလိုက်တယ်။ ‘and why do doubts arise in your hearts? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see — foraspirit does not have flesh and bones, as you see I have.' သူ့မေးခွန်းကို သူကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ Jesus ပြန်လည်ရှင်သန် နိုးထခြင်းရဲ့နောက်မှာ သူ့ကိုတွေ့သော မယုံကြည်တဲ့ သူ့ရဲ့နောက်လိုက်များကို သက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ဟာ အရိုးတွေ အသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကိုင်တွယ်၍ ရနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သူ အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ခု။ ဒါကို The Wailing ရုပ်ရှင်ရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာ အသင့်တော်ဆုံး အသုံးပြုသွားတယ်။ ဒီစကားနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဘယ်လို သက်ဆိုင်ခဲ့သလဲ။ သေချာတာကတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ကယ်တင်ရှင်ကင်းမဲ့နေခဲ့တယ်။
The Wailing ကို ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါ လူတိုင်းဟာ “ဟာကွာ .. ကောင်းလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားလို့” ရွေရွတ်ကြမည်ဖြစ်သော်ငြားလည်း အဆုံးသတ်မှာ ဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့မိမိကိုယ်မိမိ (သို့မဟုတ်) မိမိဘေးက လူများကို မေးမိကြလိမ့်မယ်။ ထိုအရာကို အချိန်ကာလအတော်အတန်ကြာ သင်စဉ်းစားနေမိလိမ့်မယ်။ အဖြေတွေ ရှာနေလိမ့်မိမယ်။ ပို၍စဉ်းစားလာလေ အဖြေကို ပို၍သိချင်စိတ်တွေ တိုးပွားလာမိမယ်။ ထို အချက်ကြောင့်လည်း ဒီဇာတ်ကားကို အကောင်းဆုံးလို့လူတစ်ချို့က ကြွေးကြော်ကောင်း ကြွေးကြော်လိမ့်ကြမယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ The Wailing ဆိုတဲ့ယခုရုပ်ရှင်ဟာ Hollywood ရဲ့ခပ်ပေါပေါ Horror ကားတွေကို “bye bye” လို့ပြောပြီး အပေါ်တစ်နေရာကနေ ခပ်ပြုံးပြုံးလေးကြည့်နေမှာပဲ ဖြစ်တယ်။
ဇာတ်လမ်းကို စပြောလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တစ်နေရာမှာ တည်ရှိတဲ့ ကျေးရွာလေးတစ်ခုမှာ ဇာတ်လမ်းကို စတည်ထားတယ်။ ထိုရွာလေးနာမည်ကတော့ Goksung တဲ့။ ထိုမြို့လေးဟာ အတော်အတန်သင့် သာယာတဲ့ရွာလေးဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။ တောတွေ တောင်တွေနဲ့ကာရံထားပြီး မြစ် ချောင်း အင်းအိုင်လေးတွေလည်း ရှိတော့ ပိုအေးချမ်းတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခုရက်ပိုင်းမှာ ရွာထဲကို Japanese အဖိုးကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကောလဟာလတွေ ထွက်လာတယ်။
မိုးတွေစွေနေတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ အာရုဏ်ဦးဟာ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်မောကျနေတဲ့ ရဲသား Jong-goo အတွက်တော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုပဲ။ မနက်စောစော ရွာထဲမှာ လူသေမှုဖြစ်လို့ဆိုပြီး သူအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကို သွားရောက်ခဲ့သောအခါ မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက စိတ်ခြောက်ခြားစရာပါ။ သွေးတွေသံတွေနဲ့ရဲရဲနီနေတဲ့ လူ့အလောင်းတွေ နဲ့အရာရာကို သိနိုင်နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့ မိသားစုဝင် လူသတ်သမားတစ်ယောက်။ အလားတူဖြစ်ရပ်မျိုးတွေဟာ သူတို့ရွာမှာ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ဆေးစစ်ချက်တွေအရနဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင်တော့ သူတို့ရွာမှာ အလေ့ကျပေါက်လေ့ရှိတဲ့ မှိုအမျိုးအစားတစ်ချို့ကို လူတစ်ချို့စားသုံးမိပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်ကာ မိမိရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ပစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချပစ်လိုက်ကြတယ်။ ရှေးဆန်တဲ့ လူတစ်ချို့ကတော့ မယုံကြည်ကြဘူးပေါ့။ ဒီကြားထဲ ရွာထဲက မုဆိုးတစ်ယောက်က သူတောထဲမှာ ထို Japanese အဖိုးကြီးက ကိုယ်တီးလုံးနဲ့သမင်တစ်ကောင်ရဲ့အသားကို အစိမ်းလိုက်စားနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ပြောလာတဲ့ သတင်းတစ်ခုကလည်း ထွက်လာတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ပြောကြတယ်။ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ အဝတ်လာလာလှမ်းလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ကို ထိုအဖိုးကြီးက မတော်မတရားကျင့်လိုက်ပြီး ရွာထဲမှာ ထိုကဲ့သို့သတ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာတယ်လို့လည်း ဆိုလာကြပြန်တယ်။
ရဲသား Jong-goo ဟာ အခင်းတစ်ခုမှာ လာကြည့်နေတဲ့ ရွာသားတွေထဲမှာ ထိုအဖိုးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ သူဟာ သံသယဝင်လာတော့တယ်။ နောက်တစ်နေ့ထိုအခင်းကို စောင့်ကြပ်နေတဲ့ တာဝန်ချိန်မှာ အဝတ်ဖြူကို ဝတ်ဆင်ထားကာ ရူးကြောင်ကြောင်အပြုအမူနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ပြီး သူမကလည်း ထို Japanese အဖိုးကြီးကြောင့် ယခုလို ရွာထဲမှာ ရက်စက်သော မိသားစုဝင်အချင်းချင်းပြန်လည်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာရတယ်လို့သူမကိုယ်တိုက် မျက်လုံးနဲ့မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလာတယ်။ သူ့ရဲ့သံသယတွေကို အဖြူအမဲသဲကွဲဖို့အတွက် သူ့ရဲ့အဖော်ဖြစ်သူ တစ်ခြားရဲသားနှင့် ထိုမုဆိုးနဲ့ပထမတစ်ခါသွားခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေမှုတစ်ခုကြောင့် ဒုတိယအခေါက်အနေနဲ့Japanese စကားပြော တရားဟောဆရာ တစ်ယောက်နဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံသွားတယ်။ တောအုပ်ကြီးထဲက ထို Japanese အဖိုးကြီးနေတဲ့အိမ်က အပြန်မှာ အဖော်ရဲသားဟာ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်။ ထို့နောက်တော့ Jong-goo ကို ပြလိုက်တဲ့ ထိုအဖိုးကြီးအိမ်ကသူယူလာတဲ့ အရာလေးကတော့ Jong-goo ရဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့ဖိနပ်လေးတစ်ခုပဲ ဆိုတာ Jong-goo သိလိုက်ရတဲ့အခါ ….
The Wailing ဟာ The Chaser တို့The Yellow Sea တို့လို ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director Na Hong-jin ရဲ့တတိယမြောက်ဇာတ်ကားပါ။ သူ့ဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ကားထက်တစ်ကား သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာကို မြင်တွေ့နိုင်တာကြောင့် South Korean တွေရဲ့အငယ်တန်း Directors တွေထဲမှာ စောင့်ကြည့်ရမဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ အမှန်တော့ ကနဦးအစကတည်းက ဇာတ်လမ်းက ကျွန်တော်တို့ကို သတိပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေဟာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ပိတ်ကားပေါ်က ဇာတ်ကောင်တွေဟာ မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ထောင်ချောက်တွေထဲကို အလွယ်တကူ ကျရောက်သွားကြတာကို ကြည့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့သတိမေ့နေခဲ့တာတစ်ခုက အမှန်တော့ ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကသာ Director Na Hong-jin ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်လှည့်ကွက်တွေထဲမှာ မျောပါသွားပြီး ထိုရုပ်ရှင်တင်ပြပုံထောင်ချောက်ထဲကို ကျမှန်းမသိ ကျခဲ့ကြတာပဲ။ ဒါဟာ Na Hong-jin ရဲ့ဇာတ်လမ်းတင်ပြပုံ အလွန်အားကောင်းလို့ပဲဆိုတာ ထိုဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးသူတိုင်း ဝန်ခံမိကြမှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အရာအားလုံးဟာ အပြစ်ကင်းတယ်။ ပြစ်ချက်တစ်ခုမှ မရှိဘူး။ အပြစ်ပြောစရာတစ်ခုမှ ကျွန်တော်ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေ ထိုင်ခုံတစ်ခုမှာထိုင်ပြီး ဒီဇာတ်ကားကို စကြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံး မိနစ်တွေကနေစပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြင်ပလက်တွေ့လောကကြီးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကို ထိုရွာလေးထဲကို ခေါ်ဆောင်သွားတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီဇာတ်ကားခေါ်ဆောင်ရာ ရွာလေးထဲမှာ စိတ်တွေ ရောက်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့စိတ်အစဉ်ဟာ ပြန်လည်ထွက်ခွာလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေမှာ လှောင်ပိတ်မိသွားပါတော့တယ်။ ရှေ့တွင်ဘာဖြစ်တော့မည်ဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းက ပရိသတ်ကို မကြာခဏတင်ပြလေ့ရှိတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေကို မြင်ရဖို့အားမွေးခြင်းဆိုတဲ့ သတ္တိတစ်ခုကိုပဲ ပရိသတ်ဟာ အားကိုးလို့ရပါတော့မယ်။ ထိုဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေဟာ ကူညီသူမဲ့ခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေလည်း အလားတူ ကူညီသူမဲ့ရရှာပါတော့တယ်။ ရှေ့တွင်ဘာဖြစ်တော့မည်ကို ကြိုသိနေသည့်အတွက် ပို၍ကြောက်ရွံမိလာကာ မိမိကိုယ်တိုင် ထိုကျဉ်းထဲကြပ်ထဲကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီး ရောက်ရှိသွားသလို ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ထိုဇာတ်ကားဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ သို့သော် .. သို့သော်.. ပရိသတ်တွေဟာ ရှေ့ဘာဖြစ်တော့မည်ကို ကြိုတင်ကြောက်ရွံနေပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံးမှာတော့ ပရိသတ်အားလုံးဟာ အရူးလုပ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ လူတိုင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေဟာ မှားကုန်တော့တယ်။ လူဆိုး လူကောင်း မသဲကွဲပဲ ဖြစ်ရတော့တယ်။
ဒီဇာတ်ကားဟာ Horror အစစ်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး သာမာန် Horror တွေလို အသံတွေနဲ့မခြောက်ဘူး။ ဗြုန်းကနဲ ပုံစံမျိုးနဲ့ရုတ်တရက်မခြောက်ဘူး။ ပရိသတ်ကို ကြည့်နေရင်းနဲ့တစိမ့်စိမ့် ခြောက်ခြားလာအောင် တင်ပြခဲ့တာ။ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေဟာ သင့်ဆီကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဦးတည်လာပြီး ရုန်းထွက်လို့မရတော့တဲ့အထိ ပိတ်လှောင်ခြင်းတွေ ခံစားလာအောင် ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တွေရဲ့ Psychology ကိုခြောက်ခဲ့တဲ့ ရှားပါး Horror ရတနာတစ်ပါးပေပဲ။
ဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ သိသာထင်ရှားတာတစ်ယောက်ကတော့ အဓိကဗဟိုနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ ရဲသား Jong-goo ရဲ့ဇာတ်ကောင်ပဲဖြစ်ပြီး သူသည် ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေ အားကိုးလို့ရတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပေ။ စိုစိုပြေပြေသိပ်မရှိပေမဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခုကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူရယ် သမီးလေးတစ်ယောက်ရယ်နဲ့ ယောက္ခမဖြစ်သူရယ်နဲ့အတူနေထိုင်ပြီး တာဝန်လစ်ဟင်းမှုတွေလည်း မကြာခဏရှိတတ်သောကြောင့် မိမိရဲ့အထက်အရာရှိဖြစ်သူက ဆိုဆဲမာန်ဟောက်ခြင်းကို ခံလေ့ရှိတဲ့ သာမာန်လူထဲက လူတစ်ယောက်ပေ့ါ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ကြောက်လန့် တတ်ပေမဲ့ မိမိရဲ့ရင်သွေးအသက်အန္တာရယ်နဲ့သက်ဆိုင်လာသောအခါ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိတဲ့သတ္တိတွေကို ဖော်ထုတ်လာခဲ့ရတော့တယ်။ သို့သော် သားသမီးကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာကာ မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကို တည့်တည့်ကြီးဝင်လာတဲ့အခါ သူဟာစိုးထိတ်မှုတွေနဲ့ဝေဝါးလာတော့တယ်။
(ဒီနေရာကစပြီး Spoilers ပါ ပါတော့မယ်။ သို့သော် လှည့်ကွက်အချို့ကိုတော့ ကျွန်တော်ချန်ရစ်ထားခဲ့ပါမယ်။ ထို့အတွက်ကြောင့် Spoilers ရှောင်ချင်သောသူများ ယခု အပုဒ်ကိုကျော်ဖတ်သွားကြပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးသွားတဲ့ တစ်ခဏတာအခိုက်အတန့်မှာ ပရိသတ်တိုင်းဟာ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မည်သူက လူကောင်းလဲ။ မည်သူက လူဆိုးလဲဟု မေးခွန်းထုတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ မိန်းမပျိုဟာ သရဲလား၊ မိစ္ဆာလား၊ ဝိညာဉ်လား၊ ရွာကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ အစောင့်အရှောက်လား၊ လူသားတစ်ယောက်ပဲလား။ ထိုမေးခွန်းတွေကို ကျွန်တော်မဖြေချင်ဘူး။ သေချာတာက သူမဟာ ရဲသား Jong-goo ရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို အဆုံးသတ်မှာ စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဆို Jong-goo တို့ကိုကူညီဖို့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ နတ်ဆရာတစ်ပါးကရော ကူညီသူလား။ မကောင်းဆိုးဝါး ရဲ့ဘက်တော်သားလား၊ ဒါကတော့ ပြောပြရန်အလွန်ခက်ခဲတယ်။ သူဟာကူညီသူတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်း အဆုံးသတ်မှာ အရာတစ်ခုကို သူ အရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။ သူဟာ ထိုအရာရဲ့ခိုင်းစေချက်အတိုင်း ရွာကို ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ အဆုံးသတ်မှာတော့ သူဟာ ဘာကောင်လဲဆိုတာ ပြသသွားခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လူတိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးလို့ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Japanese အဖိုးကြီးကရော။ သူဟာလည်း ပိုမိုအစွမ်းကြီးမားတဲ့ မိစ္ဆာတစ်ကောင်ကို တိုက်ထုတ်နေတဲ့ နတ်ဆရာတစ်ပါးလား။ သို့မဟုတ် သူကိုယ်တိုင်ကပဲ မိစ္ဆာအစစ်လား ဆိုတာ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်မှာ သရုပ်ဖော်သွားပေးတယ်။ ကျွန်တော်အခုပြောနေတာတွေကို ရုပ်ရှင်မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေ နားလည်ရန်ခက်ခဲပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဘာတွေဖြစ်နေခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်သွားကြမှာလဲဆိုတာကို ဆက်လက်သိချင်ရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကို ရှာပြီးကြည့်လိုက်ဖို့ကိုသာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေဗျာ။)
သရဲတွေ မိစ္ဆာတွေ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့အကြောင်းကို ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင် ဒီရုပ်ရှင်မှာ သေဆုံးသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ပုံတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ခြင်းဟာ ထိုသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကို သိမ်းဆည်းထားဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မရှိပေမဲ့ တစ်ခြား Asians နိုင်ငံတွေမှာ မှေးမှိန်စပြုလာတဲ့ ရှေးရိုးစွဲအယူတစ်ခုရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ အိပ်ပျော်နေတဲ့သူကို ဓာတ်ပုံမရိုက်ကောင်းဘူးတို့ဘာတို့ပေါ့။ ဟိုးတုန်းကတော့ အိပ်နေတဲ့သူကို ပုံတူပန်းချီရေးဆွဲခြင်းတို့ဘာတို့တားမြစ်ချက်တွေရှိခဲ့ပုံပဲ။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ရင် ကံဆိုးခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်တယ်တို့ဘာတို့အယူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။ နတ်ဆရာတွေဟာ သူတို့ရဲ့သရဲ တိစ္ဆေထုတ်ခြင်း ဖုတ်ထုတ်ခြင်း အခမ်းအနားတွေမှာ အဆုံးသတ်မှာ အနှောက်အယှက်တွေ ဝင်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ထိုအနှောင့်အယှက်တွေကို မကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ရင်တော့ နောက်ဆုံး ထိုနတ်ဆရာတွေ ကိုယ်တိုင်ထို ပြိတ္တာ မိစ္ဆာတွေရဲ့ခိုင်းစေခြင်းအောက်ကို ကျရောက်သွားရပါတယ်။
ဒါဟာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု။ ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုးခြင်းတို့ရဲ့အစွမ်းယှဉ်ပြိုင်မှု။ သင်ဟာ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုကြားမှာ ငါးစာဖြစ်ခံခဲ့ရသူတစ်ဦး။ သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို သူက စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ တစ်ကယ်တော့ သင်ဟာ အပြစ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့တာကိုး။ သင် အားကိုးတဲ့သူဟာ မည်သူလဲ။ လူကောင်းတွေဟာ မကောင်းသူတွေအဖြစ်ဟန်ဆောင်နေကြပြီး လူဆိုးတွေဟာ သူတော်ကောင်းတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေကြတာလား။ ဒါမှမဟုတ် လူကောင်းသည် လူကောင်းဖြစ်ပြီး လူဆိုးသည် လူဆိုးပေပဲလား။ သို့မဟုတ် လူကောင်းတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ကမ္ဘာပျက်ကြီးထဲကို သင်ကျရောက်သွားတာလား။ ထိုအဖြေတွေဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတော့တယ်။
ဂူထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် …
တတိယမြောက် ကြက်ဖတွန်သံကို သူကြားလိုက်ရပြီ …
ခြံဝင်ပေါက်က ပန်းထောင်ချောက်လေး ညှိုးနွမ်းသွားခဲ့ပြီ …
ကားပေါ်က ရုတ်တရတ် ထွက်ကျသွားတဲ့ မိုးရေတွေထဲက ဓာတ်ပုံတွေ …